उत्तर कोरियाली नेता किमकी पत्नी एक वर्षपछि सार्वजनिक रूपमा देखा परिन्
बीबीसी । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनकी पत्नी एक वर्षपछि पहिलोपटक सार्वजानिक रूपमा देखा परेकी छन् । राष्ट्रिय सञ्चारको रिपोर्ट अनुसार मंगलबार उनी किमका स्व. पिता किम जोङ–इलको जन्मदिनको अवसरमा आयोजना गरिएको कन्सर्टमा पतिसँगै देखा परेकी हुन् ।
रि–सोल्जु सबै प्रमुख समारोहमा किमका साथ देखा पर्ने गर्थिन् । तर, गत वर्षको जनवरीपछि उनी अचानक हराएकी थिइन् । त्यसपछि उनी गर्भवती भएको या स्वास्थ्यमा केही समस्या आएको हुन सक्ने आँकलन गरिएको थियो । दक्षिण कोरियाको गुप्तचर सेवाका अनुसार उनले कोरोनाका कारण पनि सार्वजनिक उपस्थिति नजनाएको हुन सक्छ र आफ्ना छोराछोरीसँग समय बिताइरहेको हुन सक्ने बताइएको छ ।
उत्तर कोरियाले अहिलेसम्म पनि आधिकारिक रूपमा कोभिड–१९ का कुनै संक्रमित नभएको बताउँदै आएको छ । जसलाई विज्ञहरुले भने असम्भव ठहर गरेका छन् ।
मंगलबारको कार्यक्रममा सबैले किम र सोल्जुको जोडीलाई ठूलो ताली बजाएर स्वागत गरेको थिए भने प्रकाशित तस्बिरमा पनि उनीहरु रमाइरहेको देख्न सकिन्छ । जसमा कसैले पनि मास्क नलगाएको र सामाजिक दूरीलगायत अपनाएको देखिएको छैन ।
रि–सोल्जु उच्चतम घरानाबाट आएको विश्लेषक छोङसङ छाङ बताउँछिन् । जसका बाबु प्रोफेसर थिए भने आमा पनि प्रसूतिविद् हुन् । मिडिया रिपोर्टमा उनी ३१ वर्षको भएको र पहिले गायिका समेत रहेको बताइएको छ । उनले सन् २००९ मा नेता किम जोङ उनसँग बिहे गरेको विश्वास गरिन्छ । सो विवाह स्व. किम जोङ–इल बिरामी परेपछि हतारमा आयोजना गराएको बताइन्छ । दक्षिण कोरियाली गुप्तचर निकायका अनुसार उनीहरुका तीन छोराछोरी छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सञ्चारले पहिलोपटक किमलाई ‘लिडर’ नभनेर ‘राष्ट्रपति’को रूपमा सम्बोधन गरेको बारेमा पनि अहिले चर्चा चलिरहेको छ । गत हप्ता उत्तर कोरियाको केन्द्रीय न्युज एजेन्सीले त्यसरी सम्बोधन गरेको हो । उत्तर कोरियामा किमका हजुरबुवा एवं देशका संस्थापक किम इल–सङलाई मात्र राष्ट्रपतिको रूपमा सम्बोधन गर्ने गरिएको थियो ।